Okinawa Ridge – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
အဆိုပါအိုကီနာဝါ Ridge လျှပ်စစ် Scooter ကုမ္ပဏီရှေ့ဆောင်တစ်ဦးထံမှလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ် အိုကီနာဝါ အိန္ဒိယကနေ။
အိန္ဒိယ 2018. နောက်တစ်နေ့အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်များတွင်ပိုမိုထက် 19 သန်းရောင်းအားနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုင်ကယ်များအတွက်အကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်တယ်, တရုတ်, အိန္ဒိယက 2030 လျှပ်စစ်မှဆိုင်ကယ်များ၏ရောင်းအားကန့်သတ်ရန်စလေိုကွောငျးကြေညာလိုက်ပါတယ် 2018. 17 သန်းပေါင်းများစွာဆိုင်ကယ်ရောင်းချခဲ့သည်။ အိုကီနာဝါအိန္ဒိယတွင်လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်များအတွက်ပထမဦးဆုံးရှေ့ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Ridge အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter 55 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းများအတွက် 1200 ဝပ်ရေစိုခံလျှပ်စစ်မော်တာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter 90 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဖြုတ်လီသီယမ်ဘက်ထရီရှိပါတယ်။ ဘက်ထရီ၏တာဝန်ခံအချိန်ဟာအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း အသုံးပြု.4နာရီသို့မဟုတ်2နာရီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Scooter လျော့နည်း, socket နှင့်ပိုပြီးအားသွင်းဘေးထွက်ရပ်တည်ချက်အာရုံခံကိရိယာ, anti-theft sensor ကို USB မှတ် start key ကို, LED မီးအလင်းရောင်ယူနစ်အပါအဝင်အများအပြားတီထွင်မှုတပ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ Scooter (အီလက်ထရောနစ်ဘရိတ်စနစ် Assist) EABS နှင့်အတူရှေ့နှင့်နောက်စည်ဘရိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter တစ်ဦးရှိပါတယ် Kinetic Energy က Recovery ကိုစနစ် (KERS) သို့မဟုတ်ဘရိတ်ကနေစွမ်းအင်ကိုဘက်ထရီပြန်ရသောဘရိတ်ခြင်းဖြင့် Air-ညစ်ညမ်းမှုလျော့နည်းစေတစ်ဦးကိုမကြာခဏလေထုညစ်ညမ်းမှု၏အရင်းအမြစ်သတိမမူသောရုပ်ပျိုဘရိတ်။
အဆိုပါ Scooter ကမ္ဘာကြီးကျယ်ပြန့်အများအပြားအရောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်သင်္ဘောစီးရရှိနိုင်ပါသည်။
ကို 2020 Okinawa ကိုမော်ဒယ်များ
Okinawa ဆိုင်ကယ်အားလုံးကို filter ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်တွင်ကြည့်ပါ။